Sicir barar xoogan oo ka jira Magaalada Boosaaso | Universal Somali TV
Sicir barar xoogan ayaa laga soo sheegaya in uu ka jiro Magaalada Boosaaso ee Xarunta Gobolka Bari, xilli cuno yari aysan ka jirin magaaladaasi.
Sicir bararkan ayaa waxa uu ka dhashay cabsida baahsan ee laga qabo xanuunka dunida ku sii baahaya ee Coronavirus.
Cabdisalaan Bashiir Cabdisalaan, Duqa Magaalada Boosaaso ayaa xaqiijiyay in sicir barar xoogan uu maalmahaanba ka jiray Magaalada Boosaaso.
"Saddexdii iyo afartii maalmood ee ugu dambeeyay sicir barar xoogan baa jiray. Dhawr waxyaabood baa sababay, oo ay ugu horeyso dalabaad badan oo ka imaanayay Gobolada Somaliya oo idil." Ayuu yiri Duqa Boosaaso.
Waxa kaloo uu yiri "Barnaamijyadaas dowladda iyaduna go'aan bay ka soo saartay in badeecadaha la hakiyo, in badeecadaha aan lagu qaali-garayn dadka danyarta ah."
Duqa Boosaaso ayaa intaa ku daray "Waxaan rajeynaynaa Insha'Allahu tacaalaa in kulamo keli keli ah aan la yeelan doono ganacsatada iyo dadka wax la soo degga, qorshahaas xalay illaa haataan waan wadnay. Insha'Allah go'aano mideysan baan rabnaa inaan ka soo saarno, oo anaga, ganacsatada iyo rugta ganacsiga Puntland aan ku wada mideysanahay."
21-kii bishii March ayay ahayd markii uu Ra'iisal Wasaaraha Somaliya, Xasan Cali Khayre uu la kulmay ganacsatada Soomaaliyeed, isla-markaana uu kaga digay inay qiimaha dadka ku qaali-gareeyaan, iyagoo ka faa'iideysanaya baqdinta laga qabo caabuqa COVID-19.
Kan-xigaJabuuti oo diiwaangelisay kiisas cusu...
Kan-horeDoorashada Guddoonka Baarlamaanka KG ...
53,493,251 unique visits